The Engine Room: Fanasokajiana Ny Teknolojian’ny Fisoloana Vava Sosialy · Global Voices teny Malagasy
The Engine Room: Fanasokajiana Ny Teknolojian'ny Fisoloana Vava Sosialy
Voadika ny 12 Avrily 2012 9:29 GMT
The engine room dia fikambanana iray manokana amin'ny fampahombiazana ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin'ny asa fisoloana vava. Manatsara sy mameno ny fitaovam-pifandraisana mba hampilamina sy hamahoahana ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin'ny asam-pisoloana vava.
Teraka avy tamin'ny ezaka fikarohana mivoatra roa herinandro taorian'ny fanonganana ny filoha Ejiptiana, Hosni Mubarak izany tetikasa izany. Hita mivandravandra avy amin'io fikarohana io fa ilain'ny mpikatroka sy ny tinendry hisahana raharaha eny amin'ny fitsarana ny fahazoam-baovao, ny fahaizana manokana ary ny loharanom-pahalalana tsara kokoa. Ao anatin'ny teny filamatrany amin'izany ny fanohanana ny rafitra sy ireo tambajotra efa misy amin'ny alalan'ny fandaminana ary ny fiaraha-miasa no mahomby kokoa fa tsy ny mifaninana hahita ny loharanom-pahalalana.
Miara-miasa amin'ny Oxfam Novib ny The engine room hanasokajy ny fikambanana, ny fihaonana, ny hetsika ary ny vondrom-piarahamonina manohana ny fiaraha-mientana fisoloana vava amin'ny alalan'ny teknolojia. Mandefa ity antso ity ho an'ireo mpamaky ny tetikasa:
Nalefa tamin'ity herinandro ity ny Fanisana ny teknisiana ara-tsosialin'ny “The engine room” hamantarana sy hametrahana ao amin'ny sarintany ny fikambanana, ny tetikasa, ny hetsika ary ny vondro-piarahamonina manohana amin'ny alalan'ny teknolojia ny vondrona mpisolovava ara-tsosialy manerantany. Ampio izahay hampahazo antoka fa tsara araka izay tratra ny Fanisana (ary azo itarafana ny traikefanao manokana sy ny asanao) amin'ny alalan'ny famaliana ny taratasim-panadihadiana pejy iray. Manaiky ny fidiran'ny vaovao izahay hatramin'ny voalohany volana Mey.
Fomba tsotra mahomby amin'ny fanohanana ity ezaka ity ny fizaranao ny rohin'ilay fanadihadiana — bit.ly/socialtechcensus— any amin'ireo tambajotranao manokana
Sharing the link to the survey — bit.ly/socialtechcensus — to your personal networks is a simple, high impact way to support this effort
Raha mahafantatra ny mikasikana fitaovana, fikambanana, fianakaviambe sns tahaka izany ianao dia mangataka anao haka ny fanadihadiana voalohany ary avy eo hanaparitaka ny mikasika izany amin'ireo akaiky anao.